Nlaghachi amụma - N'ogbe diffusers maka mkpa mmanụ | Aroma dị mfe
Ire ihe niile bụ nke ikpeazụ. N'oge a anyị Enweghị ike nye nkwụghachi ọ bụla na nzụta ndị a. Biko tụọ naanị ihe ịchọrọ!
Ọ bụrụ na enwere nsogbu na iwu gị, biko hụ na ị kpọtụrụ anyị ozugbo. A ga-akọrịrị esemokwu iwu ọ bụla n'ime ụbọchị 30 iji nweta nkwụghachi ma ọ bụ nnọchi
Ihe mkpochapụ bụ naanị ire ikpeazụ na anaghị etinye aka na amụma nloghachi a.
A ga-enyeghachi nkwụghachi maka ọnụahịa azụta zuru ezu na-ewepu mbupu.
Biko mara ma ọ bụrụ na enweghị ntụpọ, a gaghị enwe nloghachi anabatara na akara e biri ebi.
Biko mara na agaghị enwe nloghachi anabatara na igbu oge mbupu COVID-19